စတိုင်အမှတ်။ : SX-2183
အရောင်: အနက်ရောင် / Lt.grey / အနီရောင်
အရွယ်အစား Range: SML-XL-XXL
အထည်: 70% ဝါဂွမ်း 25% polyester 5% spandex သိုး, 260g
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ဇစ်ပြား၊ Herringbone တိပ်ခွေ၊
မှတ်ချက်။ ။ လက်ဝဲရင်ဘတ်နှင့်လက်ကိုင်ရော်ဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပခုံးနှင့်လက်တွင်ပြားများကိုဖြတ်။ ချုပ်ထားခြင်း၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်ဆောင်
Style No .: SH-965 ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ရေစိုခံနိုင်လွန်ကြိုး၊ ငွေရောင်ပြန်ဟပ်၊ Herringbone တိပ်၊ elastic ကြိုး၊ မျက်ခုံး၊ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ငွေရောင်ရောင်ပြန်ဇစ် + ရောင်ပြန်ပုံနှိပ်ထားသောအိတ်ကပ်အတု။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းဖက်ရှင်ကျသောချွေးထွက်အင်္ကျီသည်လူတို့၏ခေတ်သစ်ဘ ၀ တွင်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဝတ်အစားဖြစ်လာသည်။ လက်တွေ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ...
Feature: Breathable မှတ်စုများ - All-over print ပုံနှိပ်ထားသော T-shirt သည်အနုပညာနှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရောင်နှင့်ပုံစံ၏နွေးထွေးသောသက်ရောက်မှုဖြစ်ပြီးလူငယ်များနှင့်လူသိရှင်ကြားစရိုက်ကိုပေါ်လွင်စေသည်။ ရိုးရှင်းသော်လည်းမရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည်အမှန်ပင်ရှပ်အင်္ကျီဖြစ်သည်။ နွေရာသီတွင်အဖြူရောင်တီရှပ်သို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီတွင်ချွေးထွက်များဖြစ်ပါစေအက္ခရာပုံနှိပ်ခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လမ်းဒီရေပုံနှိပ်ခြင်း၏ဒီဇိုင်းသည်အဓိကအားဖြင့်အာရုံခံမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောပုံစံသို့မဟုတ်အရောင်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပ ...
စတိုင်နံပါတ် .: SH-732 ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ခလုတ်၊ ရက်ကန်း၊ တိပ်၊ ပြားနံရိုးမှတ်ချက် - အားလုံးပုံနှိပ်ခြင်း + ပန်းထိုးအမျိုးသားဖက်ရှင်၏လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူအမျိုးသားပိုလိုအထည်များသည်အက္ခရာအပြည့်အစုံပါ ၀ င်လာသည်။ ပိုလိုသည်သိုးမွှေးထိုးပြီးတက်ကြွ။ မျက်စိကျစရာကောင်းသောခံစားမှုဖြင့်ခိုင်မာသောပြန်လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ။ အ ၀ တ်အထည်နှင့်ရိုးရှင်းသောဇာထိုးထည်များသည်ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ၏အရောင်ကိုအရောင်တောက်တောက်ခြင်း၊ တောက်ပသောအစင်းနှင့်အက္ခရာပုံနှိပ်ခြင်းတို့ဖြင့်အလှဆင်ထားသည်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ pique လား ...
စတိုင်နံပါတ် .: B300155 ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic၊ Drawcord မှတ်ချက် - ရော်ဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ နောက်ကျောဘက်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောအိတ်ကပ် လေတိုက်နှုန်းကိုအသုံးချပြီးလူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီးအားကစားနည်းကအားနည်းနေသည်။ နည်းပညာအရအရောင်နှင့်ပစ္စည်းပေါင်းစပ်မှုသည်ဒီဇိုင်းဆွဲသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည် ဦး တည်ချက်ဖြစ်သည်။
စတိုင်နံပါတ်: SH-973 ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Elastic, Drawcord, Nylon zipper အသွင်အပြင် - ရှေ့ဘက်ရှိပြားများကိုခုတ်။ ချုပ်ထားမှတ်ချက်။ ရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပုံသဏ္rightာန်၊ နောက်ကျောအိတ်ကပ် ဆပ်ကပ်ကတင်ပြတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဲ့သို့မျက်စိ - ဖမ်းစားသောသက်ရောက်မှု။ အဆိုပါလိုက်တယ်စတိုင်ငယ်ရွယ်စားသုံးသူအုပ်စုများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဖြန့်ကျက်ထားသည့်အစိုင်အခဲအရောင်အားကစားသည်အားကစားဘောင်းဘီအားလွတ်လပ်သောသဘာဝသဘာ ၀ ကျစေသည်။
စတိုင်နံပါတ်: SH-696A အရောင်: ဒု - မီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: 95% polyester 5% elastane jacquard, 170g အသွင်အပြင်: ရှူရှိုက်နိုင်သောမှတ်ချက်များ: ရာဘာပုံနှိပ်ခြင်း
စတိုင်နံပါတ်: SH-695 အရောင်: မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား - SML-XL-XXL အထည်အလိပ်: ၉၅% polyester 5% elastane melanged single Jersey, 180g အသွင်အပြင် - ရှူရှိုက်မိသည့်မှတ်ချက်များ - ပုံနှိပ်ခြင်းအားလုံး - + နေရာချရောင်ပြန်ဟပ်
Style No .: SH-694 အရောင်: မီးခိုးရောင်၊ အနက်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား - SML-XL-XXL အထည်အလိပ်: 95% polyester 5% elastane melanged single Jersey, 170g + polyester / elastane ကွက်, 140g အသွင်အပြင်: ရှူရှိုက်မှတ်ချက်: နေရာချရောင်ပြန်ဟပ်
စတိုင်နံပါတ်: SH-692 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: 95% polyester 5% elastane jacquard, 170g အသွင်အပြင် - ရှူရှိုက်မိသည့်မှတ်ချက်များ - ပုံနှိပ်အားလုံး
စတိုင်နံပါတ် .: ၈၈၀၇ အရောင် - စိမ်းအရွယ်အစားအကွာအဝေး - SML-XL အထည်: ၄၀ 95 မှ ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% ast လတ်စနီတစ်ထည်အကျီင်္၊ ၁၅၅ ဂဂအင်္ဂါရပ်: တံဆိပ်ခတ်မှတ်ချက်များ: တံဆိပ်ခတ် + နေရာချထားမှုပုံနှိပ်